Teknika natoraly mampangirana hoho, tsy mila « vernis »
Tsy mora ary sarotra ananana izany hoho mangirana, kanefa tsy nosorana “vernis” izany. Rehefa tsy manosotra “vernis”
mantsy ny ankamaroan’ny vehivavy dia mamela malalaka an’ireo hohony hiaina amin’izao. Misy anefa ny fikoloana tokony hatao mandritra iny fotoana fitsaharana amin’ny “vernis” iny, mba hahatonga ireo hoho ho salama tsy hiankin-doha amin’ireny akora ireny. Raha tsy izany dia ho mora tapaka, manjonitra, komavoka … izy ireo. Ahoana ary ny atao hampangirana ny hohonao, na misy na tsy nasiana vernis ?
Raha te hanana hoho madio sy mangirana lalandava, na tsy misy “vernis” aza, dia ataovy loha-laharana ny fanamandinana sy fikarakarana ny tanana. Rehefa ampy singana menaka sy rano any anatiny mantsy ny hoho, dia malandina sy malama ho azy. Isa-kariva mialoha ny hatory dia hosory menaka na “crème” fanosotra ho azy manokana ny tananao sy ny rantsana. Atao somary mipaka hatreny amin’ny hoho izany. Raha toa anefa ka manana olana mihitsy ny hohonao, na tena tianao hilofosana manokana ny hoho, dia tsara raha mividy an’ireny “huile special ongle et cuticule” ireny, ahosotra amin’ny sisin-koho sy ny vatany manontolo. Mety koa ny “crème pour cuticule”.
Ny “pollisoir” kosa indray no fitaovana kely fikosehina ny hoho, ilaina ananana ao an-trano. Na hihosotra “vernis” ianao na tsia, dia ilaina ny fampiasana “pollisoir” rehefa avy nanadio tanana. Mampangirana hoho no asan’ny “pollisoir”. Mahasolo an’ireny “top coat” na “vernis” tsy miloko; hosorana amin’ny hoho mialohan’ny “vernis” ireny mantsy izy itony. “Pollisoir” malefaka, malama ary manala ny loto sy mampivoaka ny kalitaon’ny keratina eo amin’ny tampon-koho no ampiasaina. Tandremo anefa fa indray mandeha isa-kerinandro, raha be indrindra ary in-droa isam-bolana raha ela, no tokony hanaovana izany. Somary lalovana an’ilay “polissoir” atao somary haingana, miankavia no miankavanana ny hoho. Tsy tsindriana be akory fa lalovana. Eo no eo dia hitanao ny vokany. Fotsy botsiaka ny hoho, madio, mihiratra sady mangiloilo. 5 hatramin’ny 6 andro eo no faharetany.